Gen. Indhacadde miyuu ku dhacay dabinkii Farmaajo? | KEYDMEDIA ONLINE
Gen. Indhacadde miyuu ku dhacay dabinkii Farmaajo?
Generaal Indhacadde, wuxuu u muuqdaa inuu muddo dheer kadib ka weecday jidkii uu ku joogay afartii sano ee la soo dhaafay, wuxaana la rumeysan yahay inuu ka mid yahay koox ku milantay xaafiiska Farmaajo.
MUQDISHO, Soomaaliya - Gen. Yuusuf Maxamed Siyaad ( Indhacadde) ayaa isbuucii hore [I3 December 2021] Caasimadda kaga dhawaaqay in uu yahay musharrax xildhibaan u taagan tartanka kursiga summadiisu tahay HOP138, kaas oo degaan doorashadiisu tahay Galmudug.
Inkstoo Generaal Indhacadde uu qeyb ka qaatay dadaalkii looga hor tagay muddo kordhintii April, haddana mugdi badan ayaa hareeyay musharraxnimadiisa xilligaan, labo arrimood awgood.
Dadka sida dhow ula socday Gen. Yuusuf, waxa ay layaab ku tilmaameen inu qeyb ka noqdo shaqsiyaadka doonaya in loo boobo kuraasta baarlamaanka 11-aad ee JFS, xilli waxgaradka iyo mucaaradku qaadaceen natiijada haddii boobku si socdo.
Generaal Indhacadde, wuxuu ka mid ahaa saraakiishii, muddada ka soo hor jeeday Farmaajo, wuxuuna hormuud u ahaa, abaabulkii askartii Badbaado Qaran, ee diidday muddo kordhinta sharci darrada ahayd ee April.
“Sidee macquul u tahay isagoo diiday waqti kororsigii inuu boob u qoryo kurto, xilli siyaasiyiintii uu ku aragtida ahaa diiddan yihiin sida ay wax u socdaan, tani waxa ay ka turjumeysaa mabda’ la’aantiisa”, ayuu yiri sargaal ay ka mideysnaayeen CBQ.
Dhanka kale, xafladdii uu kaga dhawaaqay inuu yahay musharrax u taagan qabashada HOP138, wuxuu ku casuumay Wasiirka Cadaaladda Cabdiqaadir Maxamed Nuur [Jaamac], oo ka mid ah eedeysanayasha 17 December 2017 xasuuqa ka geystay Xarunta Xisbiga Wadajir.
Xafladdu waxa ay dhacday afar maalin ka hor, afar sano guuradii ka soo wareegtay, markii Cabdiqaadir Maxamed Nuur, oo xilligaas ahaa Ku-simaha Taliyaha Nabad sugidda, ahna taliye ku xigeenka hay’adda, uu ku duulay Xarunta Wadajir, kuna laayay shan ka mid ah ilaalada hoggaamiyaha Xisbiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur.
Askarta la laayay ee kobaha lagu aasay xilli ay taleefannoodu ka dhex dhacayeen jeebabkooda, waxaa dhamaantood waalid u ahaa Generaal Indhacadde, waxayna ka mid ahaayeen askar uu isagu ku daray CXDS.
Tallaabada uu xafladda shaacinta baratankiisa ugu casuumay eedeysane Cabdiqaadir Maxamed, ayaa si weyn loogu dhaleeceeyay Indhacadde, waxaana lagu tilmaamay shaqsi aan mabda’ sugan lahayn oo kaliya kursiga uu doonayo u jeeda.
Sida ay muujinayan xogo ay heshay Keydmedia Online, Fahad iyo Farmaajo, ayaa inta badan shaqsiyaadkii iyo saraakiishii hormuudka u ahaa Badbaado Qaran u ballan qaaday in ay ka dhigayaan xildhibaanno, waxaana dabinkaas hore ugu dhacay Generaal Cali Cosoble Caraay (Gacma-dulle).
Sidoo kale, waxaa Dhuusamareeb ku sugan Maxamed Abuukar Jacfar, kaas oo qudhiisa loo ballan qaaday in loo boobi doono kursi baarlamaan, u jeedkuna waa in Farmaajo ka hor tago kacdoon kale oo shaqsiyaadkaan qeyb ka yihiin.
Wasiir ka tirsan Xukuumadda Xil-gaarsiinta ee masuulka ka ah hirgalinta hannaanka doorashooyinka dadban, ayaa qeylo-dhaan ka muujiyay habka loo maamulay mid ka mid ah kuraasta Aqalka hoose ee taalla Puntland.